मोवाइलमा भएको फोटो डिलिट भयो ? यसरी गर्नुस् रिकभर  Clickmandu
मोवाइलमा भएको फोटो डिलिट भयो ? यसरी गर्नुस् रिकभर
क्लिकमान्डु २०७५ साउन १२ गते १४:५५ मा प्रकाशित
यसबाट तपाईँलाई जुन फोन चाहिएको हो, त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुने छ । यसरी तपार्इँ आफ्नो पुरानो डिलिट भएको फोटो फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।
सस्तियो नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन र पोष्टपेड मोवाइल, अब कतिमा पाइन्छ ?
अरु कम्पनीको इन्टरनेट शुल्क भोलिबाट बढ्ने, टेलिकमको भने नबढ्ने